दाहाल–नेपालले एक अर्काको प्रशंसा गर्नुको सन्देश के ? - ४ माघ २०७७, NepalTimes
काठमाडौँ : विभाजनपूर्व नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच वरीयतादेखि बैठकको अध्यक्षतामा विवाद त थियो नै, त्यसबाहेक उनीहरुबीच सार्वजनिक कार्यक्रममा एकअर्काप्रति घोचपेच हुन्थ्यो ।
त्यसको अघिल्लो दिन दाहालले नेपालको प्रशंसा गरे । बुधबार काठमाडौं जिल्ला कमिटीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भने, ‘हिजो केपी ओलीले आफूलाई एक नम्बरको अध्यक्ष भन्नु भयो । हुन त मेरो उदारता र भावनाले छोडिदिएको हुँ । नत्र एक र दुई भन्ने थिएन । अहिले हामी एक–दुई छैनौं, एक–एक छौं । मिल्नेहरुको कुरै अर्कै हुन्छ । माधवजी अहिले पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र उहाँले अध्यक्षता गर्नुभएको छ । मिल्नेहरुको कुरै अर्कै, नमिल्नेहरुको कुरै अर्कै हुन्छ नि !’
पुस २१ मा जनता समाजवादी पार्टीले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा ४८ वर्षसम्मको सहयात्रा तोडेर दाहालसँग मिलेको अध्यक्ष नेपालले बताएका थिए । ‘प्रचण्डसँग माधव नेपालको लगनगाँठो कहिलेसम्म ? यीदुईवटैको बीचको अंगालो कहिलेसम्म ? प्रचण्डजी त केपीभन्दा ‘फार बेटर,’ अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ओलीलाई सन्देश दिन दाहाल–नेपालले खुलेरै एकअर्काको प्रशंसा गरेको बताउँछन् ।, याे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।